के तपाई निन्द्रा नलागेर तनावमा हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस १ मिनेटमै निदाउने वैज्ञानिक बिधि (भिडीयो सहित) – दैनिक नेपाल न्युज
के तपाई निन्द्रा नलागेर तनावमा हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस १ मिनेटमै निदाउने वैज्ञानिक बिधि (भिडीयो सहित)
प्रकाशित द्वारा: मङ्लबार, बैशाख २, २०७७
मानिसको जीवन र शरीरका लागि नभइनहुने कुरा हो– निद्रा । मानिस अनुुसार निद्राको आवश्यकता पनि फरकफरक हुन सक्छ । कसैलाई ८–९ घण्टासम्म निद्राको आवश्यकता पर्न सक्छ भने कसैलाई ४–५ घण्टामै निद्रा पुग्न सक्छ । आफूलाई कति निद्राको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा स्वयं आफैले निर्धारण गर्ने विषय पनि हो । स्वस्थ मानिसले आफनो शरीरलाई ‘आराम’ र ‘रिफ्रेस’ राख्न कम्तीमा ५–९ घण्टा निदाउनु अति आवश्यक हुन्छ ।
मानिसमा विभिन्न कारणले निद्रा नलाग्ने गर्छ । निरन्तर लामो समयसम्म निद्रामा गडबडी भयो भने मानसिक रोग नै निम्त्याउन सक्छ । अधिकांश मानसिक रोगका धेरै लक्षणमध्ये एउटा कारण अनिद्रा पनि हो ।तर, अनिद्रा भयो भन्नेबित्तिकै ‘मानसिक रोग नै लाग्यो’ भनेर किटानीका साथ भन्न सकिँदैन । यद्यपि, निद्रा नलाग्ने लक्षणबाट कस्तो प्रकारको मानसिक रोग हो भन्ने निक्र्यौल निकाल्न सकिन्छ । ‘डिप्रेसन’ पनि प्रायःजसो निद्रा गडबडीबाट सुरुवात हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा बिहानीपख नै निद्राले छोड्छ । र, भोलिपल्ट शरीर भारी हुने र टाउको दुख्ने समस्या समेत देखा पर्न सक्छ ।
अनिद्रा भन्नेबित्तिकै सामान्यतया सुतेको समयमा निदाउन कठिनाइ हुने, निद्रा आइसकेपछि बीचमै निद्रा टुट्ने र बिहान धेरै चाडै निद्राले छोड्ने र फेरि निद्रा नलाग्ने अवस्था हो । अनिद्रा भयो भन्नेबित्तिकै ‘मानसिक रोग नै लाग्यो’ भनेर किटानीका साथ भन्न सकिँदैन । यद्यपि, निद्रा नलाग्ने लक्षणबाट कस्तो प्रकारको मानसिक रोग हो भन्ने निक्र्यौल निकाल्न सकिन्छ ।
अनिद्राको अवस्था=मानिसमा ‘मन आत्तिने रोग’का कारण पनि निद्रा नलाग्न सक्छ । यो रोग लागेका मानिसमा ओछ्यानमा जानेबित्तिकै निद्रा पर्दैन र सुतेपछि पनि छटपटी भइराख्न सक्छ । ओछ्यानमा पल्टेपछि पनि १र२ घण्टा समयसम्म पनि निद्रा पर्दैन । रातको समयमा एक पटक बिउँझेपछि पुनः फेरि निद्रा नलाग्न सक्छ, निद्रा लागिहाले पनि समय लाग्न सक्छ ।
बाइपोलार (द्यष्उयबिच म्ष्कयचमभच) को बलष्अ उजभकभ मा रातभरि नै निद्रा लाग्दैन । यस्तो अवस्थाको मानिस ओछ्यानमा सुत्नुपर्छ भन्ने सोच नै हुँदैन र नसुतिकन आफूलाई कुनै काममा व्यस्त बनाइराख्न रुचाउँछ र भोलिपल्ट पनि त्यति थकित महसुस नै हुँदैन ।निद्रा नलाग्ने अर्को कारण हो, ‘स्किजोफ्रेनिया’ । यो रोग लागेका मानिसमा भ्रम बढी हुने भएको बेलामा नसुतिकन आफै चनाखो (जाग्राम) भएर बस्ने गर्छन् । यो रोग लागेका मानिस आफूलाई कसैले ‘मार्न आउला’ कि भनेर ‘डर’ मानेर नसुती बस्ने गर्छन् ।
लामो समयसम्म रक्सी अत्यधिक सेवन र्ने व्यक्तिले एकैपटक रक्सी छोड्दा पनि हतपत निद्रा लाग्दैन र छटपटी बढी हुनसक्छ ।साधारणतया मानिसको जीवनमा अकस्मात आइपर्ने तनाव, क्षणिक उत्तेजनाको अवस्था, डर, शारीरिक या मानसिक तनाव कारण निद्रामा गडवढी हुन सक्छ । त्यति मात्र होइन, ‘अत्यधिक खुसी’कोे अवस्थामा पनि निद्रामा गडबडी हुन सक्छ । यो अवस्था भने केही दिन रहन्छ र आफै ठिक हुँदै जान्छ ।
औषधि नखाई निद्रा लगाउने तरीका=निद्रा नलाग्दा विभिन्न औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, औषधि प्रयोग गरेर लागेको निद्राले शरीरलाई फाइदा गर्दैन । औषधि नखाइकन लाग्ने निद्राले भने फाइदा गर्छ । अतः यी तरिका अपनाएर औषधि नखाई पनि निद्रा लगाउन सकिन्छ ।१. मानिसले आफूलाई दिनभरजसो कुनै न कुनै काममा व्यस्त राख्ने, जसले गर्दा शरीरमा थकित महसुस होस् । र, यसबाट निद्रा लाग्नमा सहयोग पुग्छ । मेचमा बसेर दिनभर काम गर्नु पर्ने व्यक्तिका लागि घटीमा पनि दैनिक बिहान आधा घण्टा व्यायाम गर्नु वा हिँड्डुल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
२. दिउँसो आफ्नो ओछ्यानमा कहिल्यै पनि नपल्टिने । आफ्नो ओछ्यानलाई सुत्ने प्रयोजनको लागि मात्र उपयोग गर्ने ।३. सुत्ने समयभन्दा अगाडि चिया वा कफी पिउनु हुँदैन । ४. बेलुका खाना खाएको दुई घण्टापछि मात्र सुत्ने बानी बसाल्नु उपयुक्त हुन्छ । बेलुका पेटभरी हुने गरी खाना नखानु राम्रो हुन्छ ।५. आफ्नो सुत्ने समय आफैले निर्धारण गर्ने र सधैं एउटै समयमा सुत्ने गर्नुपर्छ । यदि सुत्ने समय राती १० बजे छ भने सधैं त्यही समयमा सुत्ने बानी बसालियो भने निद्रा लाग्ने गर्छ ।६. सुत्ने समयभन्दा अगाडि हात–गोडा चिसो पानीले पखाल्ने, दाँत ब्रस गर्ने र मुख धुने बानी बसाल्दा पनि निद्रा पर्न सक्छ ।७. ओछ्यानमा बसेर टिभी हेर्ने, मोबाइल चलाउने बानी हटाइयो भने पनि समयमा निद्रा लाग्न सहयोग मिल्न सक्छ ।
८. सुत्ने समयमा बत्ती निभाएर, खुकुलो लुगा लगाएर, आँखा बन्द गरेर बस्नु पर्छ । त्यसो गर्दा पनि निद्रा नलागेमा लामो–लामो श्वास केही समय लिएर एउटै एयकष्तष्यल मा बसे पनि निद्रा लाग्न सक्छ ।९. साथीभाइ वा आफन्तले अलिकति रक्सी खाएमा निद्रा लाग्छ भनेर सल्लाह दिन सक्लान् । तर, त्यस्तो गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।१०. धेरै हल्ला हुने ठाउँमा नसुत्दा र मोबाइल फोन अफ गरेर सुत्ने बानी बसाल्दा पनि निद्रा लाग्ने गर्छ ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको एकाएक किन भयो टेलिफोन बर्ता ?